Sawirro: Maxay tahay sababta keentay inuu Axmed Madoobe kasoo dago Muqdisho? - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Maxay tahay sababta keentay inuu Axmed Madoobe kasoo dago Muqdisho?
Sawirro: Maxay tahay sababta keentay inuu Axmed Madoobe kasoo dago Muqdisho?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Madaxweynaha Dowlad Gobolleedka Jubbaland ayaa Maanta yimid Magaalada Muqdisho Ee Caasimadda Soomaaliya,waxaana lagu soo dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho ee Aadan Cadde.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa Muqdisho u yimid inuu ka qeyb galo Shirka Golaha Amniga Qaranka oo 4-December ka furmi doona Madaxtooyada Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa Muqdisho imaan doona Madaxweyneyaasha Maamul Gobolleedyada oo iyaguna ka qeyb geli doona Shirka Golaha Amniga Qaranka oo Muqdisho ka furmi doona 4-December sida uu Qorshuhu yahay.
Madaxda Maamul Goboleedyada iyo Dowladda dhexe ayaa dhawaan Muqdisho ku yeeshay kulan xasaasi ah oo lagu soo afjarayey khilaafkii weynaa ee ka dhex jiray, waxaana lagu heshiiyey qodobo dhawr ah.
Madaxweynayaasha kale ayaa la filayaa inay Berri iyo Maalinta xigta imaadaan Magaalada Muqdisho, waxaana kulankaas looga hadli doonaa waxyaabo badan oo ku aadan Amniga Qaranka.